Ngandlela-thile inkinga "Awukwazi ukudala isithonjana" ocingweni Android kaningi. Ifoni alibonisi izithombe ezindala, futhi esanda kwenziwa, awukwazi ukudubula ividiyo. Kwenzeka ikakhulukazi Smartphones "Lenovo".
Uma ubona isexwayiso "Awukwazi ukudala isithonjana," Yini okumelwe uyenze?
Ukuze kabusha ifoni yakho
Ngezinye izikhathi kuyasiza nje kabusha ifoni. Software samoispravlyaet iphutha nezithombe udlalelwe.
Isula yenqolobane yohlelo lokusebenza "Igalari"
Ukuze wenze lokhu, hamba ku imenyu izilungiselelo, ukhethe "Izinhlelo", ukuthola "Igalari", khetha "ukusula isilondolozi." Uqalise kabusha ifoni yakho. Le ndlela Ngokuvamile kuyasiza uma ocingweni eziningi isibhamu kanye inkumbulo akusho suffice.
Ungafaki okuyiphutha CD-ikhadi
Uma izithombe ezizenzakalelayo egcinwe kumemori yangaphandle (ikhadi-CD), ungakwazi kuzenze imemori yefoni yangaphakathi, futhi evulekile kusuka lapho. Uma kukhona omunye CD-ikhadi, bese ufaka bayifaka ifoni bese ubona ukuthi iyasebenza. Uma inkinga imemori yangaphandle, esikhundleni sokubhala inkulumo "Awukwazi ukudala isithonjana" izoveza izithombe kwimemori yangaphakathi noma elinye ikhadi.
Inkinga iwukuthi isicelo izithombe
Thina ukulanda iyiphi imenenja yefayela, ukuya DCIM ifolda /. It has .thumbnails ifolda - ukukususa futhi kabusha ifoni. Uma lokhu kungasebenzi, ukuya Ikhamera ifolda bese nibheka usayizi yezithombe. Lapho isicelo kungasebenzi kahle - amafayela akunalutho. Kufanele ubuyekeze isicelo isithombe bese uqala kabusha ifoni.
Ayikho imininingwane nesicelo "Igalari"
Esimweni lapho esikhundleni izithombe efonini yakho ubonisa "Awukwazi ukudala isithonjana," kodwa uma uyixhuma ikhompyutha, isithombe kungabonwa, cishe, umbuzo ngendlela ukubonisa izithombe efonini yakho.
Download kwimenenja yefayela. Through the inkumbulo evulekile (yangaphakathi noma yangaphandle) lapho izithombe zigcinwa, iya kwifolda DCIN ke Ikhamera ifolda. Chofoza kunoma iyiphi ifayela isithombe bese ubamba kuze imenyu yangaphakathi. Khetha "Vula." Uhlu kwezicelo kuvula ifayela. Chofoza isicelo "Igalari". Uma kukhona "Londoloza Okuzenzakalelayo" ezansi kwesikrini - Kumake.
Manje izithombe Izoboniswa kahle.
Ngezinye izikhathi, iphutha "Ayikwazi ukudala isithonjana" livela, uma ufuna uthuthukise ifoni yakho firmware.
Vula "Izilungiselelo" imenyu, sub-section "Mayelana nefoni", cindezela "Isibuyekezo System". Uma inguqulo entsha firmware luyatholakala, ifoni yakho izobonisa "Thwebula" inkinobho uhlu izixwayiso. Push ke. Iqala ukulanda iphasela update. Emva ukulanda kuqedile, khetha lapho kufanele ziqale ukufakwa izibuyekezo.
Ngemva ebuyekeziwe Kumiswa, ifoni ngeke ukuqalisa phansi ngokwayo. Manje ungabuka izithombe namavidiyo. Iphutha "Awukwazi ukudala isithonjana" ku-Android zinyamalale.
Camyuva, Turkey: Izithombe zokungcebeleka Izibuyekezo
Prince Albert II Monaco ekugcineni washada
White-beaked ihlengethwa: incazelo. Indlela Yokuphila endaweni yemvelo